တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်၊ လာအို အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lt. Gen. Chansamone Chanyalath အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်၊ လာအို အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lt. Gen. Chansamone Chanyalath အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိဇေယျာသီရိ ဗိမာန်ရှေ့၌ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြိုဆိုသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးတို့သည်ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံယူကြပြီး ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ကို လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ ယင်းနောက် လာအိုအမျိုးသား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့သည် အခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြသော နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်အရာရှိကြီးများကို အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ပေးကြသည်။
အဆိုပါဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်အောင်မြင့်နှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပြီး လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ လာအိုနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lyying SAYAXANG ၊ လာအိုပြည်သူ့ တပ်မတော်မှ အရာရှိကြီးများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလာအိုနိုင်ငံစစ်သံမှူးတို့ တက်ရောက် ကြသည်။
ထို့နောက် လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးသည် ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် ဦးစွာတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာ-လာအို နှစ်နိုင်ငံသည် အိမ်နီးချင်းမိတ်ဆွေကောင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုနှင့် သမိုင်းအကြောင်းအရာများတူညီမှု ရှိကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ARSA အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားပြီးနောက် အခြေအနေမှန်များကိုသိရှိပြီး နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှရပ်တည်ဆောင်ရွက်ပေးသည့်အတွက်အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ဧည့်သည်တော်ဝန်ကြီးက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိတို့အနေဖြင့်များစွာစိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် တပ်မတော်မှဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နေမှုများကိုလည်း နားလည်သိရှိထောက်ခံပါကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် လာရောက်ခြင်းဖြင့် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုတိုး တက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပြီး လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်၏ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးတာဝန် များထမ်းဆောင်နေမှုအခြေအနေများနှင့် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများအား ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
၎င်းနောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မိမိလာအိုနိုင်ငံသို့ချစ်ကြည်ရေး ခရီးလာရောက်စဉ်က လာအို နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရကြောင်း၊ လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်၏ နိုင်ငံ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်နေမှုကိုသိရှိရသည့်အတွက် လည်းဂုဏ်ယူပါကြောင်း၊ မိမိတို့တပ်မတော်အနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး တာဝန်ကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လွတ်လပ်ရေးပြန်လည်မဆုံးရှုံးစေရန်၊ အချုပ်အခြာအာဏာမဆုံးရှုံးစေရန်နှင့် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲစေရန်အတွက် ဒို့တာဝန် အရေး(၃)ပါးကို ဦးထိပ်ထားကာကွယ်စောင့်ရှောက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မိမိတို့ တပ်မတော်ကို စွမ်းရည်၊ စွမ်းအားရှိသော ခေတ်မီတပ်မတော် Standard Army ဖြစ်အောင် တည်ဆောက် လျက်ရှိကြောင်း၊ လွပ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက်ပိုင်း ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုများကို တပ်မတော်မှနှိမ်နင်းခဲ့ရပြီး ယခုအချိန်တွင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်းလျက်ရှိ ကြောင်းရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်ပြီး မြန်မာ့တပ်မတော်နေဖြင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏တပ်မတော်များ နှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် နယ်စပ်ဒေသ များတွင် ပြဿနာများမရှိတော့ကြောင်း၊ မြန်မာ-လာအို နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် ဒေသသည် လည်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းလျက်ရှိကြောင်းပြောကြားသည်။ယင်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်းနေချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ ဖြစ်စဉ်အမှန်များအား နိုင်ငံတကာမှ မသိရှိသဖြင့် သိရှိအောင်ဆောင်ရွက် နေကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ထို့နောက် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန်လည်ပတ်မှုနှင့် အဆင့် အလိုက်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တပ်မတော် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များနှင့် အားကစားအဖွဲ့များ၊ သင်တန်းသား များအပြန်အလှန် စေလွှတ်ခြင်းဖြင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားဆက်ဆံရေး ခိုင်မာတိုးတက်အောင်ဆောင် ရွက်နိုင်မည့်အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာနှင့် လူကုန်ကူးမှုပြဿနာ များမဖြစ်ပေါ်စေရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေရန်အတွက် တပ်မတော်နှစ်ရပ်ကြားပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်ချိန်တွင် အပြန်အလှန်အကူ အညီပေးရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ARSA အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် နယ်မြေတည်ငြိမ်မှုပျက်ပြားပြီး တပ်မတော်မှ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအခြေအနေများ အားရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေး ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် လာအိုအမျိုးသား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများ နှင့်အတူစုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။
ဆက်လက်ပြီး လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော် နှင့် ပြည်ထောင်စု သမ္မတနိုင်ငံတော်၊ မြန်မာ့တပ်မတော်တို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအခမ်းအနားအားကျင်းပပြုလုပ်ရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lt. Gen. Chansamone Chanyalath နှင့် လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်မှအရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြသည်။
ထို့နောက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)၊ ပြည်သူ့စစ်နှင့်နယ်ခြားတပ်များ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ထင်မော်ထွန်းနှင့် လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော် စစ်ဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယအကြီးအကဲ Brig. Gen. SINGSAVATH PHOMMASAK တို့က လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ လာအိုပြည်သူ့ တပ်မတော် နှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ မြန်မာ့တပ်မတော်တို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာ နားလည်မှု စာချွန်လွှာအား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး အပြန်အလှန်လဲလှယ်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ လာအိုပွညျသူ့တပျမတျော၊ လာအို အမြိုးသားကာကှယျရေးဝနျကွီး Lt. Gen. Chansamone Chanyalath အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိဇယြောသီရိ ဗိမာနျရှေ့၌ ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ဖွငျ့ကွိုဆိုသညျ။
ဦးစှာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ လာအိုအမြိုးသားကာကှယျရေး ၀နျကွီးတို့သညျဂုဏျပွုတပျဖှဲ့၏ အလေးပွုခွငျးကိုခံယူကွပွီး ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ကို လိုကျလံကွညျ့ရှုစဈဆေးသညျ။ ယငျးနောကျ လာအိုအမြိုးသား ကာကှယျရေးဝနျကွီးနှငျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျတို့သညျ အခမျးအနားတကျရောကျလာကွသော နှဈနိုငျငံတပျမတျောအရာရှိကွီးမြားကို အပွနျအလှနျမိတျဆကျပေးကွသညျ။
အဆိုပါဂုဏျပွုကွိုဆိုပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မွထှနျးဦး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ (လေ) ဗိုလျခြုပျကွီးခငျအောငျမွငျ့နှငျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျော အရာရှိကွီးမြားတကျရောကျကွပွီး လာအိုအမြိုးသားကာကှယျရေးဝနျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံ ဆိုငျရာ လာအိုနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Lyying SAYAXANG ၊ လာအိုပွညျသူ့ တပျမတျောမှ အရာရှိကွီးမြားနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာလာအိုနိုငျငံစဈသံမှူးတို့ တကျရောကျ ကွသညျ။
ထို့နောကျ လာအိုအမြိုးသားကာကှယျရေးဝနျကွီးသညျ ဇယြောသီရိဗိမာနျ ဧညျ့သညျတျောမှတျတမျးစာအုပျတှငျ မှတျတမျးတငျလကျမှတျရေးထိုးပွီး တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ တှဆေုံ့ဆှေးနှေး ကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ဆှေးနှေးရာတှငျ ဦးစှာတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မွနျမာ-လာအို နှဈနိုငျငံသညျ အိမျနီးခငျြးမိတျဆှကေောငျးနိုငျငံမြားဖွဈကွောငျး၊ နှဈနိုငျငံယဉျကြေးမှုနှငျ့ သမိုငျးအကွောငျးအရာမြားတူညီမှု ရှိကွောငျး၊ ရခိုငျပွညျနယျ အတှငျးဖွဈပှားခဲ့သညျ့ ARSA အစှနျးရောကျဘင်ျဂါလီအကွမျးဖကျသမားမြား၏ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုမြားဖွဈပှားပွီးနောကျ အခွအေနမှေနျမြားကိုသိရှိပွီး နိုငျငံတကာ မကျြနှာစာတှငျ မွနျမာနိုငျငံဘကျမှရပျတညျဆောငျရှကျပေးသညျ့အတှကျအထူးပငျ ကြေးဇူးတငျရှိကွောငျးပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ ဧညျ့သညျတျောဝနျကွီးက ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးဖွဈပှားခဲ့သညျ့ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ မိမိတို့အနဖွေငျ့မြားစှာစိတျမကောငျး ဖွဈရပါကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံအစိုးရနှငျ့ တပျမတျောမှဖွရှေငျး ဆောငျရှကျနမှေုမြားကိုလညျး နားလညျသိရှိထောကျခံပါကွောငျး၊ ယခုကဲ့သို့ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျ လာရောကျခွငျးဖွငျ့ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွားခဈြကွညျရငျးနှီးမှုနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား ပိုမိုတိုး တကျလာမညျဖွဈကွောငျးပွောကွားပွီး လာအိုပွညျသူ့တပျမတျော၏ နိုငျငံတျော ကာကှယျရေးတာဝနျ မြားထမျးဆောငျနမှေုအခွအေနမြေားနှငျ့ နှဈနိုငျငံနယျစပျဒသေ တညျငွိမျအေးခမျြးရေးအတှကျ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေားအား ဆှေးနှေးပွောကွားသညျ။
၎င်းငျးနောကျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မိမိလာအိုနိုငျငံသို့ခဈြကွညျရေး ခရီးလာရောကျစဉျက လာအို နိုငျငံ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုမြားကိုတှမွေ့ငျခဲ့ရကွောငျး၊ လာအိုပွညျသူ့တပျမတျော၏ နိုငျငံ့အကြိုးပွုလုပျငနျး မြားဆောငျရှကျနမှေုကိုသိရှိရသညျ့အတှကျ လညျးဂုဏျယူပါကွောငျး၊ မိမိတို့တပျမတျောအနဖွေငျ့လညျး နိုငျငံတျောကာကှယျရေး တာဝနျကိုအဓိကထားဆောငျရှကျလကျြရှိပွီး လှတျလပျရေးပွနျလညျမဆုံးရှုံးစရေနျ၊ အခြုပျအခွာအာဏာမဆုံးရှုံးစရေနျနှငျ့ တိုငျးရငျးသားစညျးလုံးညီညှတျမှု မပွိုကှဲစရေနျအတှကျ ဒို့တာဝနျ အရေး(၃)ပါးကို ဦးထိပျထားကာကှယျစောငျ့ရှောကျလကျြရှိကွောငျး၊ ထိုသို့ဆောငျရှကျနိုငျရနျအတှကျ မိမိတို့ တပျမတျောကို စှမျးရညျ၊ စှမျးအားရှိသော ခတျေမီတပျမတျော Standard Army ဖွဈအောငျ တညျဆောကျ လကျြရှိကွောငျး၊ လှပျလပျရေးရရှိပွီးနောကျပိုငျး ပွညျတှငျးသောငျးကနျြးမှုမြားကို တပျမတျောမှနှိမျနငျးခဲ့ရပွီး ယခုအခြိနျတှငျ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျအတှကျ ငွိမျးခမျြးရေးလမျးကွောငျးပျေါတှငျ လြှောကျလှမျးလကျြရှိ ကွောငျးရှငျးလငျး ပွောကွားသညျ။
ဆကျလကျပွီး မွနျမာ့တပျမတျောနဖွေငျ့ အိမျနီးခငျြးနိုငျငံမြား၏တပျမတျောမြား နှငျ့ ခဈြကွညျရငျးနှီးစှာ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှုမြားပွုလုပျခဲ့သညျ့အတှကျ နယျစပျဒသေ မြားတှငျ ပွဿနာမြားမရှိတော့ကွောငျး၊ မွနျမာ-လာအို နှဈနိုငျငံနယျစပျ ဒသေသညျ လညျးတညျငွိမျအေးခမျြးလကျြရှိကွောငျးပွောကွားသညျ။ယငျးနောကျ မွနျမာနိုငျငံ ၏ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးပျေါတှငျ လြှောကျလှမျးနခြေိနျတှငျ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး အကွမျးဖကျ တိုကျခိုကျမှုမြားဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး၊ ဖွဈစဉျအမှနျမြားအား နိုငျငံတကာမှ မသိရှိသဖွငျ့ သိရှိအောငျဆောငျရှကျ နကွေောငျးရှငျးလငျးပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွားခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြား အပွနျအလှနျလညျပတျမှုနှငျ့ အဆငျ့ အလိုကျဆကျသှယျဆောငျရှကျခွငျး၊ တပျမတျော ယဉျကြေးမှုအဖှဲ့မြားနှငျ့ အားကစားအဖှဲ့မြား၊ သငျတနျးသား မြားအပွနျအလှနျ စလှေတျခွငျးဖွငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွားဆကျဆံရေး ခိုငျမာတိုးတကျအောငျဆောငျ ရှကျနိုငျမညျ့အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံနယျစပျဒသေတှငျ မူးယဈဆေးဝါးပွဿနာနှငျ့ လူကုနျကူးမှုပွဿနာ မြားမဖွဈပျေါစရေေးနှငျ့ တညျငွိမျအေးခမျြးစရေနျအတှကျ တပျမတျောနှဈရပျကွားပူးပေါငျး ဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေား၊ သဘာဝဘေးအန်တရာယျမြားကရြောကျခြိနျတှငျ အပွနျအလှနျအကူ အညီပေးရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား၊ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး ARSA အစှနျးရောကျ ဘင်ျဂါလီအကွမျးဖကျသမားမြား၏ အကွမျးဖကျ တိုကျခိုကျမှုမြားကွောငျ့ နယျမွတေညျငွိမျမှုပကျြပွားပွီး တပျမတျောမှ ဖွရှေငျး ဆောငျရှကျခဲ့မှုအခွအေနမြေား အားရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာအမွငျခငျြး ဖလှယျဆှေးနှေး ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ လာအိုအမြိုးသား ကာကှယျရေးဝနျကွီးတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျ ပေးအပျကွပွီး တကျရောကျလာကွသူမြား နှငျ့အတူစုပေါငျး ဓာတျပုံရိုကျကွသညျ။
ဆကျလကျပွီး လာအိုပွညျသူ့ဒီမိုကရကျတဈသမ်မတနိုငျငံ၊ လာအိုပွညျသူ့တပျမတျော နှငျ့ ပွညျထောငျစု သမ်မတနိုငျငံတျော၊ မွနျမာ့တပျမတျောတို့အကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျ ရေးဆိုငျရာ နားလညျမှုစာခြှနျလှာ လကျမှတျရေးထိုးခွငျးအခမျးအနားအားကငျြးပပွုလုပျရာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ လာအိုအမြိုးသားကာကှယျရေးဝနျကွီး Lt. Gen. Chansamone Chanyalath နှငျ့ လာအိုပွညျသူ့တပျမတျောမှအရာရှိကွီးမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထို့နောကျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)၊ ပွညျသူ့စဈနှငျ့နယျခွားတပျမြား ညှနျကွားရေးမှူးရုံး ညှနျကွား ရေးမှူး ဗိုလျခြုပျထငျမျောထှနျးနှငျ့ လာအိုပွညျသူ့တပျမတျော စဈဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယအကွီးအကဲ Brig. Gen. SINGSAVATH PHOMMASAK တို့က လာအိုပွညျသူ့ဒီမိုကရကျတဈသမ်မတနိုငျငံ၊ လာအိုပွညျသူ့ တပျမတျော နှငျ့ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော၊ မွနျမာ့တပျမတျောတို့အကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး ဆိုငျရာ နားလညျမှု စာခြှနျလှာအား လကျမှတျရေးထိုးခဲ့ကွပွီး အပွနျအလှနျလဲလှယျခဲ့ကွသညျ။